Qolalka Bukaanka Kadib Kalkaaliyaha Shaqada
Home » blog » Qolalka Bukaanka Kadib Kalkaalinta Shaqada
Jimicsiga iyo ka shaqeynta waa jaangooyooyin muhiim ah oo lagu ilaaliyo taakuleynta iyo joogista caafimaadka. Hase yeeshee, jimicsi joogta ah oo culus ayaa noqon kara mid daalan, iyo sidoo kale inuu kaa tago xanaaq iyo xanuun. Tani waxay ka dhigan tahay, si buuxda, dib u soo kabashada waxay noqon kartaa mid muhiim u ah leyliga laftiisa; si ay u ugu badnaan waxtarka dib u soo kabashadaada, waxqabadka waa in si toos ah loo qaato. Iyadoo, waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo aad ku sameyn kartid arrintan, sida isticmaalka dheeraadka ah, duugista iyo cunida cuntada saxda ah, waxaanu noqon doonaa diiradda saaraya ka faa'iideysiga hawlaha kore ee isticmaalka qolka kuleylka.
Marka ugu horeysa, isticmaalka qolka kuleylka waxay yareyneysaa murugada iyo daalka murqahaaga; Tani waxay sidoo kale hoos u dhigaysaa daalka maskaxda iyo diiqada. Kudubka qolka kuleylka wuxuu kor u qaadayaa heerkulka jidhkaaga ee keena xididdada dhiiggaaga si aad uhogaliso (ballaadhan). Dilitaanka walxaha dhiiggaaga waxay keenaysaa in dhiig-kicida oo hagaagay jirkaaga. Tani, waxay u dhigantaa, macnaheedu waa muruqyada waxay leeyihiin meelo badan oo oksijiin iyo nafaqo, oo lagu caawiyo hagaajinta muruqyada. Waxay sidoo kale ka caawineysaa in si dhaqso ah looga saaro alaabooyinka qashinka oo ka yimaada murqaha xooggan ee shaqeeya, iyo sidoo kale unugyada jawaabaha difaaca jirka. Unugyada dhiiga cad ayaa loo baahan yahay si loo jajabiyo unugyada kale ee dheellitiran (iyo qashinkooda) laakiin waxay dhaawici karaan unugyada caafimaadka qaba haddii ay joogaan muddo dheer.
Marka laga soo tago fududeynta xanuunka iyo hagaajinta heerka soo kabashada, isticmaalka qolka kuleylka waxay kordhisaa dheef-shiid kiimikaad. Mar labaad, tani waa dabiiciyan dabiiciga ah ee kor u kaca heerkulka jidhkaaga. Marka la dhamaystiro jimicsiga, heerka dheef-shiid kiimikaadku aad ayuu u sareeyaa saacadaha soo socda. Taas macnaheedu waxa weeye, in guud ahaan, waxaad ku gubi kartaa tamarta (kaloriciyeyaasha) dhaqso u ah xaalad nasasho inta aad caadiyan ahaan lahayd. Fadhiga shaqada ka dib fadhiga qolka kuleylka wuxuu kordhin karaa muddada waqtiga dheef-shiid kiimikaadku uu ku jiro xaaladdan kor loo qaaday. Tani ugu badnaan waxtarka awooddaada dheef-shiid kiimikaad iyo gaar ahaan waxtar leh haddii ujeedada jimicsigaagu yahay inuu lumiyo miisaanka.
Kuwa idinka mid ah oo ku shaqeeya cimilada qaboobta, gaar ahaan khuseeya waqtigaan sanadka, isticmaalida qolka kuleylka ah waxaa laga yaabaa inay heystaan ​​waxtarro ah oo aadan ka fiirsan. Qolalka qololka waxay ka caawiyaan yareynta ciriiriga iyo naaqusidda qufaca, natiijooyinka xun ee jimicsiga aan la maqlin (gaar ahaan xilliga jiilaalka). Dareemida cunaha, ama dareenka gubashada, sidoo kale waa dhacdo caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, lid ku ah caqiidada caanka ah tani maaha natiijada hawadu qabow tahay, waxay dhab ahaantii sabab u tahay heerka liita ee fuuq-baxa. Isticmaalka qolka kuleylka ayaa sidoo kale kaa caawineysa yaraynta wax aan la jeclayn, oo aan raaxo lahayn, oo saameyn ku yeelan kara. Tani waxay hoos ugu dhacday heerka qoyaanka hawada qolalka kuleylka, iyo fuuq-celinta maqaarka la qalajiyey ee dhuunta. Calaamadahan cilladaysan waxay noqon doonaan kuwo badan aad u yaqaan kuwa ku leh neefta, macneheedu waxa weeye isticmaalka jimicsiga qolka kuleylka ah ayaa aad loogu talinayaa.
Qolalka bukaanka ee ugu badan ee laysku taxluujiyey ayaa ah in ay ka caawiyaan habka unugyada jirka. Hadda halkan runta ah, adigoo isticmaalaya qolka kuleylka ah uma baahna inuu kaa saaro jirkaaga dhammaan walxaha sunta ah. Qolka kuleylka ayaa kaa caawin doona in la tirtiro qaybaha raadinta (yar marka loo eego 1%) ee sunta jirka. Si kastaba ha noqotee, fadhiga qolka kuleylku si weyn ayuu u caawiyaa ka-ilaalinta maqaarka, wuxuuna nadiifiyaa sifooyinka. Dhididdu waa mid ka mid ah hababka jirka ee jirkaaga si aad u nadiifiso suntan, inta lagu jiro jimicsiga jimicsiga waa qaabka jirka ee qaboojinta; maxaa yeelay walxaha sunta ah waxaa laga saaraa jidhka, laakiin kor u kaca maqaarka sida dhoobo. Kuleylka iyo qoyaanka qolka kuleylka ah uma oggola dhididka inuu qalalo, si wax ku ool ah u dhamaystiraya nadiifinta maqaarkaaga. Tani waxay sidoo kale ku keentaa fuuq-celinta maqaarka, waxayna kaa caawin kartaa in aad sare u qaaddo arrimaha arrimaha maqaarka ee aad qabto.
Ugu dambeyntii, isticmaalka qolalka kulaylku waxay u nugul yihiin hyperthermia iyadoo kor loo qaadayo heerkulka jidhkaaga. Hyperthermia waa hab wax ku ool ah oo lagu dilo hay'adaha shisheeye ama noolaha ah waxaa laga yaabaa inuu jirkaaga ku jiro; maadaama aanay ku noolaan karin heerkulaadahan kor u kacay. Tusaale ahaan, marka aad qabtid qandhada jirkaaga wuxuu kor u qaadaa heerkulka si uu ula dagaallamo jeermiska. Waxaan horay ugu taabannay jawaab-celinta muraayad-dhaqameedka kicinta jimicsiga, taasoo macnaheedu yahay in jirka uu horeba 'dagaal' u yahay inuu noqdo mid caafimaad qaba intii suurtogal ah. Markaa adigoo isticmaalaya qolka kuleylka ah ka dib markaad shaqeyneyso waxay yareyneysaa fursadahaaga inaad jirratid, xitaa inkastoo aysan meesha ka saarin jiritaanka dhammaan hay'adaha shisheeye.
Boostadaas waxaa bixiyay Sam Socorro Spas Spas. Sam waa qoraa khabiir ah oo ku saabsan caafimaadka iyo fayaqabka, waxaana uu qoraal iyo baranayay mawduucyo sidan oo kale ah oo ku saabsan sanadka 10.